Home News Cabdiwali Muudeey oo afka furtay: Dalka sidaan laguma fiirsan karo!
Cabdiwali Muudeey oo afka furtay: Dalka sidaan laguma fiirsan karo!
Shalay salaadii jimcaha ayaa Gudoomiye ku xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka Mudane Cabdiwali Muudeey ayaa sheegay in dalka uu god dheer ku sii dhacayo isla xisaabtankiina uu lumay. Isaga oo isticmaalayo tusaale diini ah ayuu yiri ” ….asxaabta marka ay Nab Maxamed (CWS) uu la hadlo ama uu talo u weydiiyo ayaa waxa ay waydiin jireen hadalkaa aad noo sheegtay ma waxyi ilaah soo dajiyaa mise waa talo adiga kaa timid, marka ay noqoto talo isaga ka timid waxbaa laga waydiin jiray, laakiin wixii waxyi ah waa qowl ilaah oo waxba la iskama waydiinayo”. Waxa uu ku daray ” .. labada nin ee haya mas’uuliyada hay’adaha fulinta waa Farmaajo iyo Kheyre hadalkoodii waxa ay u arkaan in uu yahay mid aan laga hadli karin amaba aan lala xisaabtami karin”
Gudoomiye Mudeey ayaa ku dheeraaday qubadiisa sheegayna in ay muhim tahay in lala xisaabtamo xukuumadda, hadalkiisa ayaa ka muuqanayo in uu dareemayo in dalka faraha ka sii bxayo isla markaana isla xisaabtankii lumay. RW Khyere ayaa maalin cad iibsaday xildhibaanadii dalka iyo gudoomiyihii Baarlamaanka Maxamed Mursal oo noqday mid lacag lagu aamusiyay. Maqnaanshaha isla xisaabtanka ayaana keentay in RW Kheyre uu xaraasho dalka kuna tagri falo mas’uuliyadii lagu aaminay.
Previous articleJawaari oo u sheegay beesha Caalamka in Baarlamaankii Soomaaliya burbur ku dhaw yahay
Next articleBooliska Gobolka Mudug oo gacanta ku dhigay Rag maandooriye Iibinaayay!!
Dowladda Turkiga Oo Heshay Cadeymo Cod Iyo Muqaal Ah Kuwaasi Oo...
Xog:-Ogoow Sababta Shaqaallaha Madaxtooyadda Loo Ceeyriyay!!